Mena sy manga, loko roa izay hahatonga anao ho mahay mamorona sy manan-tsaina kokoa | Famoronana an-tserasera
Azonao atao ny mieritreritra indroa alohan'ny hamoahana euro an-jatony ho an'ny taranja manarakaMino ny mpahay siansa fa misy fomba tsotra kokoa aza hampitomboana ny faharanitan-tsaina sy ny famoronana. Red sy Blue dia azo antsoina hoe fanandramana.
Mpikaroka avy amin'ny Fikambanana Amerikanina ho fampandrosoana ny siansa (Fikambanana Amerikanina ho an'ny fampandrosoana ny siansa) dia nahita fa ny fijerena loko roa fotsiny dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fitadidianao sy ny fahaizanao manavao.
Fandinihan'i Juliet Zhu
Tao amin'ny fanadihadiana notarihin'ny Profesora Juliet Zhu, ny ekipa dia nanolotra ireo mpandray anjara tamina lahasa isan-karazany izay mitaky azy ireo hamorona na hihaino tsara. Ny olana dia natao tamin'ny solosaina misy fiaviana mena na manga. Raha ny hita, ireo respondent izay niasa tamin'ny solosaina misy fiaviana mena dia nahavita tsara kokoa tamin'ny lahasa izay nitaky ny sain'izy ireo, raha ny valinteny niasa tamin'ny solosaina manana fiaviana manga kosa dia nahatratra indroa heny noho ny hevitra famoronana.
Tsy mazava ny antony ananan'ireo loko ireo ireo fiasa manokana ireoSaingy manana teôria ny vondrona: "Noho ny fijanonan'ny fambara, ny fiara mpamonjy voina ary ny penina mena an'ny mpampianatra, dia mampifandray ny mena amina loza, hadisoana ary fitandremana izahay", hoy ny famaranana nataon'ny Profesora Zhu. Ny loko, noho izany, dia manosika ny ati-doha handinika bebe kokoa sy hitandrina.
Amin'ny lafiny hafa, ny manga milamina dia mampiala ny olona ary mifamatotra amin'ny antony manosika tsara.
«Satria ny manga dia mifandray amin'ny fisokafana, ny fandriam-pahalemana ary ny fahanginana, dia azo inoana fa hampihetsika ny antony manosika ho amin'ny asa fitoriana, satria ireo fikambanana ireo dia manondro tontolo iainana mahasoa izay mandrisika ny olona hampiasa olana vaovao, mifanohitra amin'ny paikady famahana «andrana sy marina», hoy ihany i Zhu.
Ny hany noraisina tamin'ity fandinihana ity dia- Raha te-hieritreritra fitsikerana bebe kokoa ianao dia andramo ny mampiasa sary an-drindrina mena eo amin'ny birao na telefaoninao. Raha te-handinika ati-doha ianao, dia mety hanampy ny rindrambaiko manga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Mena sy manga, loko roa izay hahatonga anao hamorona sy ho manan-tsaina kokoa
Fanodinana sy ny seza Pipeline avy amin'i Christophe Machet